Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Dutch Joshua Zirkzee Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Anyị Joshua Zirkzee Biography na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, Ezinụlọ, Ndị nne na nna, Enyi nwanyị / Nwunye ka ọ bụrụ, Ndụ, Ndụ Nke Onwe na Net Worth.
N'okwu dị mfe, anyị na-ewetara gị njem ndụ ọhụụ. Anyị na-amalite site n'oge nwata ya ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama.
Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ ndụ gị na-agụ gị, lee ka ọ bụ nwata ruo na nnukwu ụlọ akwụkwọ - nchịkọta zuru oke nke Joshua Zirkzee Bio.
Ndụ Ndụ nke Joshua Zirkzee.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ onye mgba, dị ka o kwere mee onye ga-eketa Robert Lewandowskiocheeze na-achọ ihe mgbaru ọsọ. Agbanyeghị, ọ bụghị ọtụtụ Fans mara akụkọ Joshua Zirkzee, nke bụ ihe na-atọ ụtọ. N’atughi nnukwu nsogbu, ka anyi bido.
Joshua Zirkzee Nwatakiri Akụkọ nke:
Little Josh hụrụ bọl n'anya mgbe ọ bụ nwata.
Malite, ọ na-aza aha otutu -Josh. Joshua Orobosa Zirkzee a mụrụ na 22nd ụbọchị nke May 2001 na nna ya Dutch, Remco Zirkzee, na nne Naijiria n'obodo Schiedam, Netherlands. Ọ bịara n'ụwa dị ka ọkpara nke ụmụ abụọ amụrụ site na njikọ dị n'etiti nne na nna ya.
Oge nwata Josh juputara na njem nleta di nma na Jọdan, nwanne ya nwoke nke nta. Na 3, ezinụlọ ya kwagara Rotterdam, ebe egwuregwu bụ ụkpụrụ nke ọha mmadụ.
Dị ka Marcus Rashford, obere Josh nọ ebe niile na bọọlụ ahụ ọ na-egwuri egwu n'ime ime ụlọ.
Mgbe nile, ndị mụrụ ya ga-etegharị mgbidi ụlọ ha nwere ntụpọ n'ihi ọrụ ịgba bọl. N'ọtụtụ oge, Zirkzee nwara igwu nne ya ka ọ na-agagharị n'ime ụlọ na nri.
Joshua Zirkzee Ezinụlọ:
N'ịga n'usoro ọmụmụ ya, ndị ịgba ọsọ ụkwụ bụ nwa amaala Dutch nke nwekwara akara Nigeria Roots. Na-ekpe ikpe site na ezinụlọ nne ya, onye nwere nkà ịga n'ihu nwere njikọ chiri anya na Isoko, nke bụ mpaghara dị na Delta steeti, Nigeria.
Imirikiti mba ndị dị n'Africa nwere mpako ịchọpụta na ndị ntorobịa bụ ndị nke ha. Ikekwe ọ lọtabeghị n'obodo nne ya na Southern Nigeria.
N'aka nke ọzọ, mgbọrọgwụ nna nna Zirkzee na-aga Schiedam, nke bụ obodo akụkọ ihe mere eme na South Holland.
O doro anya na ebe amụrụ ya nke nwere ọnụ ọgụgụ ndị bi na 76,000 gụnyere ụfọdụ ọwa mmiri dị mma iji gbaa gburugburu. Moreso, amaara nke ọma maka ịnwe igwe ikuku kachasị elu n'ụwa.
Joshua Zirkzee Ezigbo Ezinụlọ:
Site n'oge ọ bụ nwata, ndị mụrụ ya nyere ya na nwanne ya nwoke ihe niile ha chọrọ.
Ọzọkwa, ezinụlọ ya nwere ihe ịga nke ọma dị ka ezinụlọ na-etiti ụlọ nke na-echeghị ọtụtụ ego. Site n'ọnọdụ ego ha, Remco na nwunye ya nwere ike iziga Joshua n'ụlọ akwụkwọ mmuta.
Joshua Zirkzee Bio - Akụkọ nke Football:
Dịka anyị kwuburu na mbụ, akara ngosi a gosipụtara ọtụtụ njem metụtara egwuregwu ka ị na-etolite.
Iji hụ na Zirkzee jiri ikike o bu pụta ụwa, ndị mụrụ ya gwara ya ka ọ debanye aha ya na VV Hekelingen agụmakwụkwọ mgbe ọ bụ 5.
N'oge ahụ, ọganihu gosipụtara ọtụtụ ihe ndị ga-ekwe omume ma kwekọọ n'ụzọ kwekọrọ na ndị ọgbọ ya. Ọ bụ onye mmụta ngwa ngwa nke na-esighi ike ịgbaso ntuziaka nke ndị na-azụ ya.
Otú ọ dị, nna ya enweghị afọ ojuju na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ya wee chọọ ụlọ akwụkwọ asọmpi. N'ihi ya, Remco Zirkzee nwere nwa nwoke mbụ ya na Spartaan '20 n'okpuru ọkwa nke Ricardo Willemse na 2010.
Site na ala ebe ọ na-azụ ya, onye na-awakpo ya na-anọkarị n'etiti ndị otu ya.
Joshua Zirkzee Ndụ Ndụ Mmalite:
N'ime afọ atọ sochirinụ, onye mwakpo ahụ soro nwa nwanne ya (Nelson Amadin) rụ ọrụ iji meziwanye ma ahụmịhe na ụzọ aghụghọ.
Oge ezumike ọ bụla ndị ntorobịa hụrụ ya ka o si Spartaan '20 gaa ADO Den Haag. N'ebe ahụ, ọ gosipụtara maka U-16 nke klọb, n'agbanyeghị na ọ dị afọ 14.
Zute otu n'ime ụmụaka ndị kasị nwee mmetụta na ADO Den Haag ntorobịa guzobere dị ka nke 2015.
Otu ihe banyere mmalite ya bụ na Zirkzee siri ike ma toro ogologo karịa ndị otu ya.
Ihe osise a mere ka ọtụtụ ndị ọgbọ ya nwee mmasị n'ebe ọ nọ. Fọdụ n'ime ndị na-elekọta ya gosipụtara eziokwu ahụ bụ na ọ bụ ya kpatara 95% nke mmelite ya.
Joshua Zirkzee Bio - tozọ A Maara Aha:
Ka o sina dị, ndị na-egwu egwuregwu si Feyenoord ahapụghị ịbanye na nwata na-eto eto na ụlọ ọrụ ha na 2016.
Na njem ya na Bayern Munich n'afọ sochirinụ, ọ kpalitere nnukwu ịnụ ụtọ euphoria na kọntaktị bọọlụ mbụ ya na Bundesliga.
Fans enweghị ike ịmụrụ mana ibi na mmiri nke o kere na ndị Bavaria.
You maara nkenke nke onye ọkpụkpọ ahụ ozugbo ọ bịarutere na Bayern Munich ka ọ meriri okpu na mpụta mbụ ya maka ndị otu echekwabara. Nke a na-adọta otuto site na superstars football dị ka Jerome Boateng.
Joshua Zirkzee Bio - Bilie Iji Mara Aha:
Na mmetụta ya na ngwa agha nke Hansi kpatụ aka gaa, Nigeria gbalịrị ịrapụ nwa nwoke ọlaedo ahụ n'òtù ha. Otú ọ dị, Josh kpochapụrụ ihe ọ bụla Gernot Rohr mere dị ka ọ na-egosi maka nna nna ya.
Robert Lewandowski Nwa akwukwo n'akwukwo akuko nke oma
Obi abụọ adịghị ya, ndụ ọrụ ya na ndị Bavaria jupụtara n'ọtụtụ ememme dị ka ha meriri ọtụtụ trophi.
Oge ya na ndị Bavaria adịghị agwụ ike. N'ezie, ọ nwere ihe ùgwù iji merie ọtụtụ trophies na onyinye na klọb.
Ka m na-achịkọta Bio a, Zirkzee bụ ọdụdụ nwa Dutch nke kacha nwee goolu na Bundesliga. Mgbe ọ gụchara afọ ndị mbụ ya na trel kọntinent, Bayern Munich nyere ya ego na Parma na Jenụwarị 2021. Ihe ndị ahụ gụnyere nhọrọ ịzụta. Ndị ọzọ dị ka ha na-ekwu bụ akụkọ ihe mere eme.
Joshua Zirkzee Nwanyị nwanyị / Nwunye Iji Bụrụ:
Enweghị ụzọ onye na-eto eto ma na-ekpo ọkụ na-egwu egwu dị ka Josh agaghị enwe ndị na-enwe mmasị na nwanyị.
N'oge a ịdị adị ya, ọ bụ ihe dị otú o kwesịrị na mkpebi ya ịhọrọ onye ọ chọrọ ka ya na ya mee ga-abụ nhọrọ kacha emetụta ndụ ya.
N'ihe edeturu a, Zirkzee na - akpachi anya na enyi ya nwanyị mara mma. Aha ya bụ Celina Kerr, na ọ bụ onye ama ama nke Instagram.
N'ezie, ọ chọghị ikikere nke nna ya ma ọ bụ nne ya iji gosi enyi ya nwanyị na mgbasa ozi.
N'agbanyeghị ịbụ onye ọhụụ na-abịanụ, Zirkzee achọtara onwe ya ezigbo enyi nwanyị.
Joshua Zirkzee Ndụ Nke Onwe:
Kedu ihe na-eme ka nwoke ahụ nwoke Dutch mara mma?… Nke mbu, ọ bụ ezi nkọwa nke onye nwere àgwà Gemini zodiac.
Site na ihe anyị huru, Zirkzee nwere ike jikọtara ọnụ na mkpụrụ okwu na iche echiche dị ukwuu nke na-amasị ndị ọgbọ ya.
N'ezie, ọ bụghị onye a anụrụma. Mana ọdịnihu na-atọ ụtọ ihe ọ carbonụ drinkụ carbonated ya mgbe ya na ndị enyi ya na-ekpori ndụ. N'ezie, ọ na-ewere ịdị ọcha nke ya dị ka ihe kacha mkpa. N'ihi ya, ọ naghị a smokeụ sịga.
Isoro ndị ibe ya nọrịa bụ otu n’ime ọtụtụ ihe na-enye ya ọ joyụ.
Onye egwuregwu a ma ama bara ọgaranya, enweghị obi abụọ banyere ya. Site na 2021 Net Worth nke ihe ruru million 2 nde, Zirkzee egosighi mmasị na ibi ndụ okomoko.
N'ọtụtụ oge, onye na-eto eto ma onye ọgaranya na-ahọrọ ịnya ịnyịnya ígwè ya obere n'okporo ámá.
Ọ na-ebi ndụ dị mfe nke na-enweghị ọtụtụ akụnụba. I nwedịrị ike iche na ọ dịbu ebe obibi ndị mọnk.
Ọ bụ gburugburu ụlọ ka ụfọdụ n'ime ezigbo omume na nkekọ na-eke, na-ewusi ike ma na-echekwa.
N'ezie, Zirkzee enweela ọtụtụ oge ncheta na ọ blụ na ezinụlọ ya. N'ihi ya, anyị na-ewetara gị ozi gbasara nna ya, nne ya, ụmụnne ya, na ndị ikwu ya.
Banyere Joshua Joshua Zirkzee:
Onye otu onye metụrụ ndụ onye ọrụ ahụ bụ Remco Zirkzee, nna ya. N'ụzọ na-akpali mmasị, nna Josh na-elekọta ọganihu bọlbụ ya ruo mgbe ọ dekọtara ihe ịga nke ọma na ọkwa kacha elu.
Maka ihe ndekọ ahụ, Remco gosipụtara na ọ naghị etinye nwa ya nwoke mkpebi ọ bụla. Ihe niile o mere bụ ịkwado Zirkzee, dịka nna ọ bụla ga-eme.
Banyere mama Joshua Zirkzee:
Ee, ogwe aka nne ya nwere mmetụta dị nro ebe ọ na-enweta nkasi obi oge ọ bụla ọnọdụ na-agbawa obi. Ọ bụ onye Naijiria na akpụkpọ ojii ya na-egosi na ọ bụ agbụrụ Africa.
Izute nne Joshua Zirkzee. Obi abụọ adịghị ya, ọ ketara ọdịdị ojii nke mama ya nke Nigeria.
N'ezie, ndụ ya amaliteghị n'inwe nsogbu, n'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụụrụ nwa ya nwoke ihe nlere anya. Obi abụọ adịghị ya, ndị Dutch nwere obi ụtọ ga-enwe ekele maka ihe ọmụmụ ndụ ọ kụziiri ya.
Banyere ụmụnne nwanne Joshua Zirkzee:
Ikekwe ị maghị na nwanne Josh (Jordan Zirkzee) bụkwa onye egwuregwu bọọlụ. Ọ bụ onye nkwado kachasị mma maka onye na-awakpo ya.
Na-akpali mmasị Jordan onye a mụrụ na 2005 nwekwara otu otu ndị ntorobịa - Feyenoord - dị ka nwanne ya nwoke mere.
Dị ka nwanne ya nwoke nke okenye, ndị otu egwuregwu bọọlụ Naịjirịa ga-ebuso Netherlands agha maka onyinye na-abịa.
Zute nwanne Joshua Zirkzee, Jordan. N'ezie, ọ mara mma karịa Josh (ị nwere ike ịrụ ụka n'ezie na nke ahụ).
Banyere ndị ikwu Joshua Zirkzee:
Dị ka okwu na-aga, ndị nne ochie bụ nne nwere ọtụtụ ntu oyi. N'ihi ya, ha na-echekarị na ha na-eche ịhụ naanị gị ụbọchị niile. Ka a sịkwa ihe mere Zirkzee ji jikọọ nne nne ya enweghị nghọta.
Ezinụlọ ya jupụtara na ume dị mma. Hụ otu o si enwe obi ụtọ oge ya na nne nne ya nọ.
N'ụzọ na-akpali mmasị, nne nne ya anaghị efunahụ ohere ọ bụla ikiri nwa nwa ya egwu maka Netherlands. N'etiti ndị ezinụlọ ya, enweghị ozi dị mkpa gbasara nna nna ya yana nne na nna ya na nwanne nne ya.
Joshua Zirkzee Eziokwu Eziokwu:
Iji mechie Biography nke onye na-awakpo ya, lee ihe ole na ole banyere ya nke ga - enyere gị aka ịmatacha akụkọ ndụ ya.
Nyocha anyị banyere ego ọ na-enweta na Bayern Munich na-egosi na Zirkzee na-anata ego ruru € 830,000 kwa afọ. Iji nyere gị aka ịghọta ụdị ụgwọ ọnwa ya, anyị akwadoro tebụl a n'okpuru.
Kwa Afọ € 830,000
kwa ọnwa € 69,167
Kwa Izu € 15,937
Kwa .bọchị € 2,277
Kwa elekere € 95
Inweta kwa sekọnd:
O nwere ike iju gị anya ma ọ bụrụ na anyị agwa gị na ndị Dutch ga-arụ ọrụ ruo afọ 3 na ọkara iji rite ihe Josh na-enweta n'ime otu ọnwa.
Anyị etinyela nke ọma na nyocha gbasara ụgwọ ọnwa ya. Chọpụta n’onwe gị ego Zirkzee nwetara kemgbe ị bịara ebe a.
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Joshua Zirkzee's Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Eziokwu nke 2: Ogbugbu:
Na ụwa nke egwuregwu, ebe inking na-aghọ ụzọ ndụ maka ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu, Zirkzee agbachiwo anya na ọnọdụ nke 21st narị afọ.
Ikekwe ịbụ nwata dị obere bụ otu n'ime ihe kpatara na ọ gaghị eso ihe ndị masịrị ya Depf Depad na Memphis na-abanye akara na ahụ ya.
Eziokwu nke 3: FIFA FIFA stats:
Site n’ile anya, ihe onye na-eti ihe yiri ka ọ bụ egwuregwu. O doro anya na arụmọrụ ya pụtara ìhè na Bayern Munich emebeghị ka ọtụtụ stats ya elu na nyocha 2021 FIFA.
N'agbanyeghị na o nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ihe Perr Schuurs, Josh ka nwere ọtụtụ ọrụ ọ ga-eme tupu àgwà ya ga-amalite igosipụta agba akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ niile na Stats ya.
Ọ ghaghị ịrụsi ọrụ ike iji bulie usoro FIFA niile.
N'ikpeazụ, Jọshụa rụzuru ọtụtụ ọrụ na ndụ ya n'ihi na nna ya kwadoro agụụ ya maka ịgba bọl.
Moreso, ndụmọdụ nne ya na mkpakọrịta nwanne ya nyere ya ịnụ ọkụ n'obi ịhapụ ịda mbà n'oge ihe ịma aka. Ọ bụ ekele nye ezinụlọ ya na ụwa nwere ihe ùgwù ịnụ ụtọ egwuregwu egwuregwu ya taa.
Daalụ maka ịnọnyere anyị na Biography nke Afro-Dutch nwa nwoke ọla edo. Na Lifebogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ mgbe anyị na-ewepụta akụkọ ndụ ọkacha mmasị gị.
Y’oburu n’ichoo ihe obula n’ile adighi nma na Joshua Zirkzee Bio, Obi oma mee ka anyi mara na ngalaba nkọwa. Maka nchịkọta ngwa ngwa nke ncheta ahụ dị n'ihu, jiri tebụl Wiki anyị n'okpuru.
Aha n'uju: Joshua Orobosa Zirkzee
aha otutu: Josh
Age: 20 afọ na ọnwa 2.
Ebe amụrụ onye: Schiedam, Netherlands
Nna: Okechukwu Zirkzee
Ụmụnne: Jordan Zirkzee
Enyi / Nwunye ka ọ buru: Celina Kerr
Ezigbo Net: 2 nde (2021)
Rygwọ ọnwa kwa afọ: € 830,000
elu: 1.93 m (6 ft 4 na)